Okusalungiswa Icebo Eliphelele Le-Amazon Lesenzo Ukubuyisela i-Akhawunti Yomthengisi ye-Amazon
Ungaluhlela Kanjani Iplani Ephelele Ye-Amazon Yesenzo Ukubuyisela i-Akhawunti Yakho Yomthengisi?
Okusalungiswa A Perfect Amazon Plan Of Action
Ukumiswa kwe-Amazon Plan of Action impela kuyisivumelwano esikhulu kubathengisi abaningi base-Amazon. Kufana nokuthi kwesinye isikhathi uqhuba ibhizinisi elichumayo kanti okwesibili, konke konakele. Ngokuncintisana okukhulu, kubaluleke kakhulu ukuhlala phezulu emdlalweni wakho. Futhi ukwehluleka ukwenza lokho kuholela ebhizinisini elibi. Ingcindezi ihlale ingummese entanyeni ngoba ngeke wazi ukuthi izinga lomkhiqizo wakho lehla nini endaweni yesikhulumi. Futhi lokhu kuphazamisa impela ibhizinisi lakho lilonke. Kepha, ukumiswa komthengisi isitolo esiphelele. Futhi ukubhekana ngokuphumelelayo nalokho udinga isu elingenakuphikiswa okungukuthi i-Amazon Plan of Action yakho.
Luyini uHlelo Lokusebenza lwe-Amazon?
Kunezizathu eziningi ngemuva kokumiswa komthengisi. Kepha, iphuzu elibalulekile ukuthi "Luyini ngempela uhlelo lokusebenza lwe-Amazon".
Kuhle ukwenza lula, kuyisu olicabangayo ukubhekana nanoma iyiphi inkinga ongase uyicabange engaholela ekumisweni komthengisi. Izimo ezahlukahlukene zidinga uhlelo oluhlukile lokusebenza olwenza kube nzima kwesinye isikhathi kwabaningi. Kungani? Ngoba kudinga ukuqonda okuthile kwepulatifomu. Ukwazi ukuthi yini ezosebenza?
Umuntu kufanele aqonde inkinga ngomongo wesikhulumi okungukuthi i-Amazon kuleli cala. Kujwayelekile impela ukuthi i-akhawunti yakho yomthengisi imiswe okwesikhashana. Lesi yingakho kubalulekile ukuthi ufunde nge-POA noma ngabe i-akhawunti yakho ayimisiwe.
Njengoba ngishilo ngaphambili, "Ngasikhathi sinye ibhizinisi elijabulisayo elichumayo kanti okwesibili livaliwe ngokuphelele". Lokhu akuthinti kuphela izinsuku noma amasonto ebhizinisi kepha kungaholela nasekuvinjelweni okuphelele, ngaphezu kwalokho, kungagcina konakalise isithombe sakho noma ukuthembeka kwakho endaweni yesikhulumi. Futhi lokho kuyingozi noma ungenacala.
Ngabe i-Amazon Plan of Action isiza kanjani ekubuyiseleni i-akhawunti yomthengisi?
I-Amazon Plan of Action eyakhiwe kahle iyindlela umuntu abuyisela ngayo i-akhawunti yakhe yomthengisi. Okudingekayo ekumisweni kwakho kokuthunyelwe yincwadi yesikhalazo ye-Amazon, kodwa !! Isithako esiyinhloko kuwo wuhlelo lokusebenza. Icebo lokusebenza liyi-roadmap yokuthi uzoyilungisa kanjani inkinga njengoba kuhloswe yi-Amazon ngaphambi noma ngemuva kokulethwa.
Amasu okwenza i-Amazon Plan of Action engenakulinganiswa
Ngaphambi kokuthi umuntu abhale i Incwadi yesikhalazo ye-Amazon, kuhle ukuqonda ukuthi uzodinga impendulo engenzeka, kungaba manje noma ikusasa elizayo. I-Amazon Plan of Action ngokuyisisekelo iqukethe izinto ezintathu:
Ukuqonda Umsuka Wembangela:
Ngokuqonda kwenkinga, isigamu sokulwa sesivele siphumelele. Ukuqala kwayo kungaba ukufunda nokuqonda isaziso sokumiswa. Le yi-imeyili ethunyelwe kuwe ngaphambi kokumiswa. Futhi, uma kukhona izexwayiso bese ubheka le ndaba bese uyiqonda kahle.
Amandla okuqonda okungalungile yiphuzu lapho uvame ukubona khona isisombululo. Ngalokhu, kungadingeka ukuthi ungene ngokujulile futhi umane udlule kuzinqubomgomo njengoba kushiwo enkabeni yomthengisi.
Manje ngokwesibonelo ake sithi i-akhawunti yakho imiswe okwesikhashana ngenxa ye-ODR noma Izinga lokukhubazeka kwe-oda. Into yokuqala kuzoba ukubheka izinqubomgomo zohlelo ezihlobene ne-ODR. Umuntu kufanele abheke ukuhleleka kwangaphambilini lapho kwenzeke khona izindaba ezinjengalezi bese ehlola ukuthi ngabe ikhona yini imikhiqizo eyiphutha ekhona ohlwini lwakho oluthunyelwa kumakhasimende. Futhi, kubalulekile ukwazi ukuthi yiziphi izinkinga ezingachazwa ngaphansi kwesambulela se-ODR. Izindlela ezinjengalezi zizokusiza ukuthi ubuyisele i-akhawunti yakho futhi wenze icebo lokusebenza ngempumelelo.
Isixazululo (Isixazululo Esisebenzayo):
Lesi yisigaba sesibili lapho udinga ukunikeza isixazululo. Isibonelo khipha zonke izinto ezinesici. Noma mane ubuze abahlinzeki, ungahlola nomkhiqizo obuyiselwe ukuqinisekisa inkinga. Lokhu kudinga ukuqhathanisa umkhiqizo wakho nesizathu sokuwubiza ngokuthi kunephutha. Futhi, noma ngabe yikuphi, zama ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezihamba phambili noma ngabe isizathu sokubuyiswa kwe-oda sibonakala singasebenzi. Futhi qiniseka ukuthi uxazulula zonke izinkinga zamakhasimende akho futhi le yingxenye engenzeka ngempela. Ubufakazi balokhu buzothunyelwa Ohlelweni Lokusebenza. Kufana nokukhokha izikweletu ukuze uthuthukise amaphuzu akho esikweletu futhi ucele imali mboleko (isifaniso nje).
Izinyathelo zokuvimbela ukumiswa okwesikhashana okuzayo:
Ukulungisa udaba oselusondele kumane nje kubhalwe ngokwanele, kufanele uqiniseke ukuthi akuphindeki nakancane ngokuzayo. Qiniseka ukuthi lonke uhla lokuphakelwa alunamanzi ngekusasa ukumiswa kwe-akhawunti yomthengisi we-amazon. Izinyathelo ezithathwayo ukugwema noma iyiphi inkinga yesikhathi esizayo ngokwesibonelo zithi I-ODR (Futhi !!), lezo zinyathelo zizokhulunywa ku-Amazon Plan of Action.
Kubalulekile ukuthi uqiniseke ukuthi i-Plan of Action oyenzayo incenga abamele i-Amazon. Kufanele azi ukuthi uthathe impendulo engenzeka futhi ukulungele ukuhlala uzibophezele ekunikezeni insizakalo esezingeni elifanele. Lokhu ngeke nje kuphela kuthuthukise isikhundla sakho ebhizinisini kepha kuzogcina ukumiswa komthengisi we-Amazon kukude nawe.
Izinto ezizofakwa kuhlelo lokusebenza lwe-Amazon
Ngaphandle kokuqonda inkinga, ukudala nokusebenzisa izixazululo, nokwenza izinhlelo zokuvikela, kunezinye izinto futhi. Lezi yizinto ezenza ukuthi udaba lwakho lube ngcono futhi zenze i-Amazon Plan of Action yakho ikhange.
Nikeza ngemininingwane eyiqiniso
Kubalulekile ukunikela ngemininingwane efanele inkinga yakho. Futhi ungalokothi uphike noma iyiphi idatha ebuzwayo futhi ebonakala ibalulekile ukuyabelana. Ukumelana nalokhu kuzokhuphula ukuthunjwa kwakho endaweni yesikhulumi se-Amazon. Isibonelo nge-ODR isidingo esisodwa akumele sibonise ukubuyekezwa okuhle kwamakhasimende ngoba ngeke kwenze lutho.
Sebenzisa Amaphuzu Echashazi
Kubalulekile ukwenza i-Amazon Plan of Action yakho iskene kalula. Abantu abaningi bagcina bebhala izigaba ezinde. Futhi noma kungabonakala ngathi wenza okuthile okuhlaba umxhwele kunalokho kuthinta ukufundeka kwayo kuphela. Cabanga ngalokhu, uma ngikunikeza izingcezu ezimbili ongazifunda: esisodwa sinamagama angaphezu kwenkulungwane kanti esinye sinamakhulu ambalwa. Futhi zombili lezi zingcezu zinikeza inani elifanayo, ungakhetha elifushane. Eqinisweni noma ngubani emhlabeni angayikhetha. Thina bantu sithanda ulwazi olulula nolungaskena.
Faka isingeniso esifushane
Ngenkathi ngikucela ukuthi ugweme ukusebenzisa izigaba, ukuba nendima yesingeniso emfushane kuzosetha umongo. Kubalulekile ukutshela abamele i-Amazon (ngokomongo nodaba oselusondele) lapho uvela khona. Lokhu kungabonakala kungenasidingo kwabanye kepha ukutshela inkinga yakho nokusetha okuncane komongo kuzokusiza kuphela. Futhi thembeka !!!
Cabanga ngokuSebenza koMthengisi
Ukusebenza komthengisi kuyinto ebaluleke kakhulu edinga ukuphekelwa. Futhi, kungaphezu kwezinombolo zokuthengisa njengemethrikhi. Gcina i-Amazon isecaleni lakho, ukuhlinzeka ngenani elihle lezinombolo zokuthengisa akwanele. Esikhundleni salokho, umuntu kufanele azi ngemithetho eguqukayo nohlaka lwenqubomgomo olubekwe yi-Amazon. Futhi qiniseka ukuthi i-akhawunti yakho ayephuli. Lokhu kungenziwa nguwe (ukwenza okusebenzayo kancane) noma ukuthola insizakalo ekuhlinzeka ngokufunza okujwayelekile nezibuyekezo maqondana nodaba.
Qiniseka ukuthi ubhekana noMsuka Womsuka
Lokhu kungenzeka kube iphuzu lokuqala kulolu hlu (ngiyaxolisa ngokuba livila). Ukusingatha imbangela yomsuka yingxenye ebaluleke kakhulu. Kepha ukuyiphatha ngempumelelo kuyinkohliso. Amasu okukhulunywe ngawo ngenhla ayindlela yokwenza uHlelo Lokusebenza oluphelele. Qiniseka ukuthi uyayibhala phansi noma umane uyibeke odongeni (uma lokho kukusebenzela).
Njengoba ngishilo, izigaba ezinde ngeke zikusize. Ukungeza idatha edingekayo efanele udaba kuzokwenza. Ngakho-ke qiniseka ukuthi incwadi yakho yokugcina yesikhalazo imfishane kepha usanikeza yonke imininingwane edingekayo ekhona. Uma uyeka ukukwenza lokho kungahle kube kubi ukukhombisa kwakho inhloso yokushintsha ngoba awukwazi ukunikeza impendulo engenzeka kuyo yonke into. Futhi noma ngabe wenza lokho futhi kuyathandeka ukukugcina kufushane ukuvimbela noma yini kumongo wesikhathi esizayo.
Izinto okufanele uzigweme kuhlelo lokusebenza lwe-Amazon
Njengoba, sesikhulumile “nokwenziwayo” ngakho-ke kubalulekile futhi ukubhekelela “okungafanele kwenziwe”. Kunezinto eziningi abantu abagcina bezenza ngokungalungile ngezinto abazenza ngokulungile. Lokhu kungenza ukuthi udaba lwakho lube nzima, ngakho-ke, qiniseka ukuthi uyakugwema lokhu ku-Action Plan yakho ye-Amazon.
Abathengisi abaningi baphendula ngamawala, lokhu akufanele kube njalo. Impendulo yakho yokuqala yithikithi lakho legolide lokubuyisela i-akhawunti yakho, ungayimosheli ngemizwa emincane. Ukuba yinkampani yokubuyisela, sibona abathengisi abaningi bebhala izincwadi ezihlanganisiwe ezinganikeli ushintsho kunalokho baxoxa indaba ehlukile.
Alukho uhlelo lokusebenza noma izinyathelo zalo. Futhi, uma kukhona lapho-ke abenzi mqondo owanele noma balethe noma yiluphi ushintsho kumongo nenkinga esesondele. Ngaphezu kwakho, uhlelo lolimi olubi nezimpawu zokubhala kumane nje kubuhlungu ekhanda. Futhi, uma ucabanga ukuthi kubonakala kukubi lapho ufunda bese ungithemba, kungahle kube kubi kakhulu. Awusebenzisi lelo thuba kunalokho ulikhahlela ngefasitela bese ulibuka lisheleleka esandleni sakho.
Usuku onqume ngalo ukuba ngumthengisi ku-Amazon kwaba usuku owabhalisela ngalo zonke izinqubomgomo ze-Amazon. Noma ngabe uzizwa ungafanele kangakanani, ngeke kukusize nganoma iyiphi indlela ukukuchaza encwadini yakho. I-Amazon ivuselela izinqubomgomo zayo futhi imisa okwesikhashana abathengisi ukuvikela abathengi bayo.
Ligama elikhulu futhi lifuna ukugcina ukuthembeka kwalo emakethe. Ongakwenza ukugxila kalula kuhlelo lokusebenza lwe-Amazon. Ukwehluleka ukwenza kanjalo nokwenza noma yikuphi ukuphawula ngenqubo ngeke kusize.
Kusukela kuzalwa i-Amazon, bekuyinto yomthengi. Inhloso yakho konke lokhu ukuvikela abathengi. Ukuphawula ngalokho ngeke kusize. Uma uthola izibuyekezo ezingezinhle ngakho-ke iphutha lakho emehlweni e-Amazon. Futhi, yebo kunezikhathi lapho umthengisi engenaphutha empeleni ngenxa yanoma imuphi umsebenzi wokukhwabanisa kepha i-Amazon ithatha izinyathelo ngokumelene nalokho. Kepha ukusho ikhwalithi yamakhasimende ngeke kusize.
Esikhundleni sokuthi ubasize noma ngabe kubukeka kubi kangakanani kuzoba khona. Khumbula lokhu !!! Ibhizinisi laseAmazon linzima kakhulu njengekhasimende lalo elinzima kakhulu. Uma ukwazi ukubhekana nokubi kakhulu ungabhekana nanoma yini. Futhi yebo gwema lokhu ngazo zonke izindleko kuhlelo lwakho lokusebenza lwe-Amazon.
Ukuziba izisekelo kungalimaza
Sivele sixoxe ngezinto eziyisisekelo ngaphezulu. Ukuqonda imbangela, ukuhlinzeka impendulo engenzeka, nokuvimbela izingqinamba zesikhathi esizayo ukugwema ukumiswa kwesikhathi esizayo. Lawa ama-mantra ayisisekelo ngakho-ke anamathela kuwo. Yize kunjalo, incwadi yesikhalazo ebhalwe kahle inobuhle bayo. Ngakho-ke qiniseka ukuthi ugcina ibhalansi phakathi kwayo yonke into ukudala uhlelo lokusebenza lwe-Amazon olungenakuphikiswa.
Isibonelo Sokudlulisa Isinqumo se-Amazon
Ukuze wakhe i-Amazon Plan of Action yakho, sikunikeza ngesifanekiso sezinto ngokulandelana kwazo. Uma ufisa ukubhala uhlelo olukhulu lokusebenza ngakho-ke le fomethi izokusiza impela.
Kule ngxenye uzobe utshela ngawe futhi usho izinto ezahlukahlukene eziwusizo. Isibonelo: ungubani igama lakho lomthengisi, incazelo mayelana nebhizinisi lakho noma uhlobo lwemikhiqizo oyithengisa endaweni yesikhulumi, bese kuba isizathu sokumiswa.
Incazelo Yenkinga yakho
Ukwamukela nokubeka ngokusobala inkinga yakho kuyinjongo yale ngxenye. Uchaze inqubo oyisebenzisayo ukukhomba inkinga. Bese uchaza ukuthi kungani le nkinga yenzeke kwasekuqaleni. Noma ngabe kungenxa yobudedengu ungakhathazeki (kuyinto ejwayelekile ukwenza iphutha) kepha kubalulekile ukuthi uthembise ukungalenzi iphutha.
Futhi qiniseka ukuthi ungeza yonke imininingwane efanele kule ngxenye. Futhi ubukhulu kufanele bube njengokuthi uthatha umthwalo ophelele ngokwenzekile. Futhi-ke, kufake lokho enhliziyweni ngoba ukuqonda ukuthi bekuyiphutha lakho kuzokusindisa ngokuzayo.
Le yingxenye lapho utshela khona ngezenzo ezithathwe nguwe ukulungisa inkinga. Chaza ngokusobala izinyathelo ozithathe wena neqembu lakho. Futhi sitshele ngezenzo ezithathiwe ukuvika inkinga efanayo ngokuzayo. Lokhu kungafaka izinto ezinjengamathuluzi, izinqubo, noma iyiphi inqubo okungenzeka yenzekile.
Yonke into enhle idinga isiphetho futhi njengoba usufinyelele ekugcineni, kungcono ukuphothula incwadi yakho. Yisho isifinyezo esifushane sakho konke okwenzile ukubuyisela i-akhawunti yakho yomthengisi. Futhi okokugcina kodwa usho okuncane, yisho isicelo sakho sokubuyiselwa kabusha ngokucacile ngoba leyo yinhloso.
Futhi yile ndlela ongaqhamuka ngayo ne-Amazon Plan of Action enhle. Ngezansi kwesampula le-Amazon Plan of Action template. Ungathatha ireferensi kuyo ukuze uzenzele eyodwa:
Faka i-Akhawunti Yomthengisi ye-Amazon - Izinsizakalo Zokuphinda Zisize Zingasiza Kanjani?
Kungani uqasha Uchwepheshe we-Akhawunti ye-Amazon ukuze abuyiselwe? [Akhawunti ye-Amazon]
Imicabango engu-4 ku- "Ungayihlela Kanjani Iplani Ephelele Ye-Amazon Yesenzo Ukubuyisela i-Akhawunti Yakho Yomthengisi?"
i-skil skor Euro 2020
Juni 1, 2021 ku-3: 42 pm
Indlela epholile! Amanye amaphuzu avumeleke ngokweqile! Ngiyabonga ukuthi ubhale lo mbhalo
futhi yonke iwebhusayithi ihle impela.
Juni 4, 2021 ku-11: 46 pm
Lesi yisihloko esiseduze nenhliziyo yami… Ngiyabonga kakhulu! Empeleni ikuphi imininingwane yakho yokuxhumana?
Juni 10, 2021 ku-4: 07 am
Xhumana nathi ku- (+1 775-737-0087) ukuthola eminye imininingwane.
Juni 10, 2021 ku-4: 08 am